Dzvinyiriro inoitirwa pavana yakakura! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa9 December 2019	• 16 Comments
Kune vana vari muzvikoro zvepuraimari uye vevachiri kuyaruka panofanirwa kuve nekumanikidzwa kwakanyanya iko zvino zvekuti vadzidzisi havangovataurira chete kuti vachiri kugona kusarudza jenda, asi dambudziko remamiriro ekunze rinogadzirawo kushomeka kwemapoka. Kana kanenge koda kutsauka maitiro kuve akajairika, saka mumakore achangobva kupfuura aya zano rakawedzerwa kuti iwe unogona achiri kusarudza murume kana murume wako uye kuti uchachinja.
Kudzvinyirira kwechikwata chechangobva kuitika kunouya kubva kunevanopikisa mamiriro ekunze (FFF, 666. Uye iwe unogona kutaura kuti kune yakawanda yevadzidzi vakagadziriswa brain vanopa mukuisa kumanikidza kuchizvarwa chidiki. Ivo vakagadzirirwa izvi zvinogonesa. Chero chero pepanhau raunovhura: ivo vazere nekupararira kwemamiriro ekunze uye chero kwaunotarisa kana kuteerera, nhema dzinounzwa sechokwadi. Izvo zviri nyore kwazvo kana uine zvese zvekudhinda muhomwe; izvo hazvina kusiyana muChina kupfuura mune yedu sham democracy. Kana iwe uchidzokorora kazhinji zvakakwana, munhu wese achazvitenda. Uye kana iwe zvakare uine chokwadi chekuti iwe unokwanisa kuburitsa kunzwa kwekuti "iwe hausi" mukirasi kana kubasa, ipapo kudzvinyirirwa kweboka kunotarisira yekupedzisira kushinha.
Fomula yekubudirira inoratidzika kunge inoratidza kuratidza magrafu mashoma achiperekedzwa nekwaziso "Teerera kune IPCC masayendisiti eUN". Chinangwa chinoruramisa nzira, asi muchina wekuparadzira uyu unoita kuti vana nevakuru vatende kuti nzira idzi dzinodiwa nekuti zvikasadaro isu tinofa. Uye muchina wekuparadzira unogara uchiuya nechimwe chinhu chitsva. Isu tine izvo zvakare nzvimbo dzakafa mumakungwa, umo musina kukwana okisijeni uye hove dzinopera.
David Attenborough angave achakwanisa kutungamira yakajeka manyepo show. Akatoita izvozvo neepolar bear revanhu (maona pano) uye zvakare ne walrus pakanga paine chiratidzo chekunyengera uye kunyengedza (ona pano. Idzi nhu mbiri dzinoratidzika kunge dziri kukura panzvimbo yekudzikira, saka kune ese maviri hapana kutsakatika nekuda kwekunyunguduka kwemazaya echando. Zvichakadaro, madzinza ose ari kurima gadheni mune enhema iyoyo, nekuti David anogona kuataura nekunakisa pane kamera mune yakasarudzika Chirungu. Mushure mezvose, iye anogona kuzvidaidza Sir uye Vatongi eakavanzika akarongeka usanyepe! Kwete, ndezvevakuru uye havareve nhema, ivo chete vane zvakavanzika.
Iwe zvino une marudzi ese emapoka emamiriro ekunze ayo anomanikidza zvikuru chizvarwa chidiki. Iyo Greta Thunberg mantra "Tinofanira kuteerera kumasayendisiti" inoyeuchidza nezvenguva ye sekuru vake akabatsira kumisikidza Nobel Prize Committee uye akazvipa iye neshamwari dzake dzesainzi Nobel Prize. Verenga kuti sei Senee Arrhenius uyu (shure kwaizvozvo baba vaGereta Svante Thunberg zita rake), ndiye akatanga iwo theory yekudziya kwepasirese ne CO2. Idi chokwadi chekuti akagamuchira Mubairo weNobel rakange risisinei nekururamisa kwesainzi kwedzidziso yake, asi pachinhu chekuti aigona kuzvipa iye mubairo.
Nenzira, tateguru waGreta aimirirawo eugenics uye saka aive nemafungiro akadai seaya evaNazi maererano nekuchena kwedzinza. Aida kudzikisa huwandu hwenyika. Saka Greta paakati titeerere kune UN IPCC masayendisiti, zvinoita sekudzokorora kwezvakaitwa nasekuru nasekuru. Akapa zvipo zvesaenzi kushamwari dzake uye vamwe vakasara. Masayendisiti anotitsanangurira kuti CO2 haigoni kupisa pasi zvakare haina kunzwiwa. Tinofanira kuteerera kumasayenzi akasarudzwa. Mari nebasa zvakatove nezvesarudzo yakakosha kuna baba vakuru-sani, uye zvichiri kushanda nanhasi.
Dzvinyiriro pavana yakakura! Iwe unofanirwa kuve unoita shanduko yemamiriro ekunze kana iwe usingade kuwira kunze kwechikepe. Uye kana vadzidzisi vakakuudza kuti pasi rinopisa uye zvakare mumapepanhau ese, ipapo iwe haugone kuzviramba. Kunyanya kana "musikana wechidiki anotapira akadaro aine mabhebhi" anozviitira zvakazara pese paanogona. Hapana munhu anoita kunge anoziva kuti Greta Thunberg uyu anobva kumhuri inemukurumbira uyo aive aine chirongwa ichi pasherufu kwemakumi emakore uye kune avo rusaruro rweusainzi rwaive rwakakosha kudarika chokwadi. Akave akagadzirirwa izvi zvekuparadzira basa.
Uchiri kukwanisa sei kudzivirira vana vako kubva kune ino huwandu hwekutya? Kana iwe ukandibvunza? Kwete. Pamwe hazvigoneke! Tiri kuenda kunguva iyo mamiriro ekunze mamiriro ekunze achasimudzwa kusvika pakakwirira zvekuti ichava chimiro chitsva chehushushi mumaki ye "kuponesa pasi." Izvi zvichawedzera kuwanda zvekuti chero munhu asingatendi kuti pasi rinenge richidziya nekuda kwe CO2 uye zvakadaro haatendi kuti isu tichafa kunze kwekunge pasina matanho akaomarara anowana iwo anofunga kurangana. Izvi zvichabatanidzwa nekushushikana kwepfungwa, kwaunoda iwe kutarisirwa kwepfungwa. Misasa yekudzidziswa mumupendero weGeorge Orwell nhau yakanyorwa zita 'kutarisirwa'.
Vana vane mafungiro akasiyana vanosangana nekushushikana kwakanyanya kwepfungwa. Izvi zvanga zvatova zvakadaro nekushanduka kwemhirizhonga yevakadzi uye zvino zvichaitika zvakare nemamiriro ekunze. Naivowo vachadaro chirwere chepfungwa nekuremara 'kwekurembera pamapamba' uye saka 'kutarisirwa' uye mishonga ichaiswa.
Isu tiri kupupurira kuunzwa kwehutsva hutsva pasi pemureza wemuraraungu; kuburikidza ne "kukosha kwekuchengetedza mamiriro ekunze". Iyo swastika yakavhurira nzira muraraungu (ona pano. Isu tiri kupupurira master script yeLuciferian yenyika-iri-mukugadzira. Lucifer uye muraraungu zvakabatana imwe kune imwe. Nyanzvi (dzakabhadharwa) murwi wemuraraungu weGreenpeace akavakirwa munzvimbo dzese dzenharaunda uye brainwash chizvarwa chidiki kune dzidziso dzaLucifer. Muraraungu chiratidzo chevarwi vehurumende yeLuciferian yenyika. Verenga rangu bhuku nyowani kuti uwane izvo izvo tenzi script inosanganisira; iyo nyika inotungamirwa sei kuenda kune iyo transgender transhuman uye izvo zvatichiri kukwanisa kuita.
Source chinyorwa listings: ad.nl, inoxddial.com, ericmaisel.com
Sekuru vaGreta Thunberg-sekuru vanoshanduka kuva muumbi wegreenhouse athari uye kuderedzwa kwehuwandu kuburikidza eugenics
Tags: CO2, fascism, Featured, zvepasi rose, Greta, mamiriro okunze, mamiriro ekunze, kudziya, rainbow, Thunberg, warmin
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mukadzi wechidiki uyu ave wepfungwa?
Uyewo verenga izvi:
Ngativei netariro kuti iye nderechokwadi, nekuti ini ndinofunga kuti chinhu chidiki chehukama kuti musikana uyu ave kusundidzirwa mberi chaiko nguva iripo mutoro mukuru we (kururamisa) kushoropodzwa pamusoro pake Greta Thunberg achangodururwa. Iko iko iko iko ikozvino yakapa iyo 'mascot' yayo yekuvhiringidza, uye mushure menguva yakati rudzi rwekunyomba kana 'kusunungura' iri kusikwa yakakomberedza Naome uyu?
Izvi ndizvo chaizvo kufunga kwako, Martin (ona zvawanyora nezvaRobert Jensen pakati pevamwe). Ini ndinoona kuti zvinyorwa zvako uye bhuku rakanaka kwazvo zvinondiita kuti ndiwedzere kusahadzika kupfuura zvandaive ndakaita, uye ini handireve hazvo kuti ndizvo zvisina kunaka. Izvo zvinodikanwa, nekuti budiriro inotyisa yenguva ino iri kuwedzera kukurumidza, uye kuumbiridza mukati uye kuburikidza neyekunyepedzera midhiya enhau kunoita sekunowanda uye kupenga zuva rega rega.
Ndakafunga zvakafanana nezve izvo. Saka chirevo changu pavhidhiyo.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine kufungidzira kuduku uye kunyange kuvimba kuti inosvika ichokwadi asi hauna chokwadi, saka kubatsira kwekusahadzika kwakatobviswa.
Naome, bye Naomi Fake musikana, Fake Girl (a YouTube Greetaatje)
Ndatenda Mr Vrijland
Kana iwe uchifananidza swastika nemuraraungu, iyo agenda haina kunaka.
Iyo swastika yakagadzirirwa kukundikana maererano neiyo ajenda, kwete mureza wemuraraungu, handiti
Kana isu tinofanira kududzira nenzira iyi kuti swastika haina kumisikidzwa kubviswa uye mutemo Dambudziko rekupindura uye saka rakatsiviwa neUN / Rainbow mureza
Kuti uwane mhinduro kumubvunzo iwo, verenga chinyorwa chakabatanidzwa. Mariri ndinoritsanangura zvakadzama.
Iyo swastika yakabatwa chibharo naHitler, asi isu tanga tichiziva kuti mafemekesheni akanaka pakukanganisa.Zvino zvimwechete zvinoitika muraraungu. Pakutanga izvi zviratidzo zvakanaka asi zvinobatwa chibharo chose uye zvinokanganisa kuita zvakaipa uye kudzvinyirira. Nenzira iyoyo, ivo vaviri vanotadza nemaune aya zviratidzo.
Izvi akazvimiririra nenyaya yekuti ini ndinobvumirana naMartin kuti isu tinogona kuve nekusahadzika kwedu pamusoro pekuomeswazve kwemafashama. Kana kusikwa kwaive kwakakwana, reset haina kudikanwa.
Kana iwe ukaverenga bhuku rangu, uchaona zvinorehwa nemuraraungu, uye iwe uchanzwisisa kuti ichauya sei ngarava yechivi.
Mindsupply akanyora kuti:
Ndinovimba kuti vanhu vazhinji vanoverenga izvi ,, uye kunyanya vechidiki.
Hazviregi apa. Zvese zvinhu ndezvenhema izvo zvaunoona pane tel (nhema) chiratidzo. Ivo vese vanoita sevatambi (kubva pakuratidzira kune vezvematongerwo enyika uye izvo zvinonzi kurwiswa). Iyo apuro inotapira .. Asi ndizvo chaizvo zvese nhema uye zvinoshandiswa kuita chirongwa!
Taura nezvehuduku, pwere uye swastika.
Tinovaona vachifora zvakare, chete vaine muraraungu pamapfudzi avo? Nhoroondo ichadzokorora pachayo here? Iwo 'mamiriro ekunze' anowoneka nevadzidzi vanoteedzera. Greta's Greenpeace mamiriro ekunze ehondo, Kuwedzera Kunopandukira etc. kuita kwakanyanya kutya:
'Am 1 Dezember 1936 yakaratidza Hitler das Gesetz zu Hitler-Jugend. Darin aivapo kuti maJunge ab the Alter von 10 makore muHJ körperlich und geistig im Sinne of the Naziis unterrichtet und ausgebildet yakava müsse. '
Tsiva iyo H neK ye 'Mamiriro ekunze', uye '10' ine '4', uye zvakare mushandise kune vasikana, uye isu tine rondedzero chaiyo yeiyo nzira yekuparadzira iyo pwere dzanhasi dzakagadziriswa uye dzakagadzirirwa kuita zvinopesana neiyo 'zvisirizvo' vanhu avo, nemotokari yavo, ndege uye kupisa kwegesi, vanogona kukonzera 'kuguma kwenyika' mumakore 10.
Pasina craziness? Kwete, izvo zviri kuseka zvinangwa.
Asi chidiki Sophia kubva kuHanson marobhoti ari mukugadzira uye inoratidza yakanaka AI ine kunyange manzwiro ekudzidza maitiro (Epstein investor).
Emo Kuvaka !!!
Mwana mudiki anokwanisa kumutsa manzwiro kupfuura mukuru mukuru weimwe
Hapana chando mumakore gumi? ha ha ha
« Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo! »
Total Visits: 16.085.433
Marcos op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1